Wiil Ay Ayadi Dhashay Ayaan Garoonka Dhexdiisa Ku Ah,Qaniinyadii Luis Suarez-na....Chiellini Oo Buugiisa Si Lama Filaan Ah Ugaga Hadlay Dhacdadii Suarez. - Gool24.Net
Wiil Ay Ayadi Dhashay Ayaan Garoonka Dhexdiisa Ku Ah,Qaniinyadii Luis Suarez-na….Chiellini Oo Buugiisa Si Lama Filaan Ah Ugaga Hadlay Dhacdadii Suarez.
Dhawrkii todobaad ee ugu danbeeyay waxaa warbaahinta kubbada cagta haystay buug uu qoray difaaca xulka qaranka Talyaaniga iyo kooxda Juventus ee Georgio Chiellini kaas oo uu meelo badan eedayn kula kulmay.
Qaabkii uu Georgio Chiellini wax uga qoray Mario Balotteli iyo xidigo kale oo ay isku soo koox noqdeen ayaa keentay in Chiellini lagu sifeeyay bilaa ixtiraam si xun u fikira laakiin taasi kamay joojin in qoraalada buugiisu ay ciwaano sameeyaan.
Mid ka mid ah dhacdooyinkii la sugayay ee buuga Georgio Chiellini layska waydiinayay waxay ahayd qaniinyadii uu Luis Suarez kala kulmay koobkii aduunkii 2014 kii markaas oo Suarez lagu ganaaxay afar bilood oo laga mamnuucay wax walba oo kubbada cagta ku lug leh.
Haddaba waxaa la daabacay qaybta buuga Georgio Chiellini ee uu kaga hadlay qaniinyadii uu Luis Suarez kala kulmay sanadkii 2014 kii intii lagu jiray kulankii Italy iyo xulka Uruguay.
Laakiin markale kalmadaha uu Georgio Chiellini isticmaalay ayaa noqon kara kuwo eedayn u keeni kara wuxuuna ku dooday in isagu uu “Garoonka dhexdiisa ku yahay wiil ayadi dhashay” isla markaana uu jecel yahay xidigaha u dhaqma sida Luis Suarez oo kale.
Dhinaca kale Georgio Chiellini ayaa buugiisa ku sheegay in dhawr maalmood kadib markii uu qaniinyada kala kulmay Suarez uu telefoon ka wacay balse ayna ujeedadiisu ahayn in uu raali galin siiyo.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halkan idiinku soo turjuntay sheekada buuga Georgio Chiellini ee uu kaga hadlay dhacdadii uu Luis Suarez ku maray waqtigiisii waayihiisa ciyaareed ugu xumaa.
Georgio Chiellini ayaa qoraalka buugiisa cusub ee uu qaniinyadii Suarez kaga hadlay waxa uu ku yidhi: “Anigu waan ka helay rabitaankiisa in uu cid waxyeelo, haddii uu guuldaraysto isagu waxa uu nodaa gool dhaliye caadi ah. Wax amakaag lihi may dhicin maalintii koobka aduunka ee 2014 kii”.
“Inta ugu badan ciyaarta waxaan calaamadiyay Cavani oo isna ah ciyaartoy kale oo adag. Waxaan xaqiijistay in isagu (Suarez)uu garabka iga qaniinay. Way dhacday, laakiin taasi waa qorshihiisa uu xidhiidhka jidh ahaaneed kula sameeyo cida uu la dagaalamayo, waxaanan sheegi karaa in ay sidoo kale tayda tahay”.
“Isaga iyo anigu isku mid ayaanu nahay, waxaanan jecelahay in aan wajaho weerar yahanada isaga oo kale ah. Dhawr maalmood kadib isaga ayaan wacay, laakiin looma baahnayn in aan raali galiyo”.
“Anigu waxaan sidoo kale garoonka dhexdiisa ku ahay wiil ay Ayadi dhashay, waanan u han waynahay iyada. Rabitaanka in aad cid waxyeelaysaa waa qayb kubbada cagta ka mid ah. Si aad u garaacdo ciyaartoyga kaa soo hor jeeda waa waxaa qasab kugu ah in aad maskax badnaato”.
Georgio Chiellini ayaa markii uu Suarez qaniinyada kala kulmay waxa uu si wayn garsooraha ugu qalqaaliyay in uu kaadhka cas siiyo laakiin dhibaatadii uu Suarez ganaaxii FIFA ka dhaxlay ee afarta bilood looga ganaaxay kubbada cagta ayaa keentay in aanu qof danbe ilkihiisa galin kadib markii uu Chiellini soo afjaray liiska ciyaartoydii uu Suarez qaniinyada la soo beegsaday.
Si kastaba ha ahaatee, Luis Suarez iyo Georgio Chiellini ayaa waqtiyo kale iskaga hor yimid kooxaha Juventus iyo Barcelona markaas oo ay colaadii ay soo mareen u badaleen saaxiibtinimo iyo ay nabadgalo isla gaadheen.